झापाकै लागि सुविधा सम्पन्न कोभिड अस्पताल वा आईसुलेसन केन्द्र यहाँ बन्न सक्छ | Prabhavkari News
झापाकै लागि सुविधा सम्पन्न कोभिड अस्पताल वा आईसुलेसन केन्द्र यहाँ बन्न सक्छ
दमक/ यतिखेर स्थानीय देखि लिएर केन्द्र सरकारसम्मलाई कोभिडका विरामीहरुको ब्यवस्थापन तथा उपचारका लागि जनस्तरबाट तिब्र दबाब छ । यो स्वभाविक हो । संबिधानमा स्पष्ट रुपमा स्वास्थ्य सम्बन्धि हकलाई मौलिक रुपमा स्वीकार गरिएको छ । बारम्बार रुपमा झापामा आईसुलेसन सेन्टर वा कोभिड अस्पतालको ब्यवस्थापन गर्ने बिषयमा स्थानीय तह र जिल्लास्तरमा हुने छलफल तथा बैठकमा आवाज उठिरहेको छ । कतिपय ठाँउमा अस्थाई रुपमा आईसुलेसन सेन्टरहरु पनि बनाईएकाछन् ।
अझ यस्तो महामारीको समयमा राज्यको दायित्व अहम नै हुन्छ । धेरै लगानी गरेर कोभिड अस्पताल वा आईसुलेसन सेन्टर खोल्ने अवस्था स्थानीय तहको नहोला र समय पनि अहिले छैन । यसर्थ भएका संरचनाहरु प्रयोग गर्नु सबैभन्दा बुद्धिमानी हो । विद्यालय तथा अन्य सार्वजनिक स्थलभन्दा अस्पतालका लागि नै बनाईएको संरचना झनै उपयोगी र सहज बन्छ सक्छ । यस्तै भवन कमल गाँउपालिकामा रहेको छ ।
दमकबाट नजिकै, पाडाजुंगी गौरीगन्ज सडक खण्ड अन्तरगत (कमल गाँउपालिका वडा नं. ७ ) गेउरीया छेउमा सुविधा सम्पन्न एउटा सरकारी भवन निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको छ । त्यो पुर्वाञ्चल क्षेत्रिय आयुर्वेद चिकित्सालय भवन । निर्माण व्यवसायीका अनुसार ९० प्रतिशत काम पुरा भएको छ । टायल, लिफ्ट लगायतका केहि काम गर्न बाँकी छ । भारतबाट आउनु पर्ने सामान आएमा यो काम सम्पन्न गर्नलाई बढिमा १ महिना लाग्छ । ५० शैयाको सुविधा सम्पन्न चिकित्सालय भवनलाई आईसुलेस सेन्टर वा कोभिड अस्पतालको रुपमा किन प्रयोग नगर्ने ?
निर्माण ब्यवसायीलाई जुन सामाग्रि ल्याउनु पर्नेछ त्यो ल्याउनलाई सहजीकरण गरेर निरन्तर काम गर्दा दूइदेखि तीनसातामा सबै काम पुरा हुने अवस्था रहेको बताईन्छ । यसले गर्दा अहिले अस्थाई संरचनामा समेत स्थानीय, केन्द्र वा प्रदेश सरकारले खर्च गर्नु पर्दैन । एकान्त र मानिसको आवतजावत खास नहुने ठाँउमा भवन रहेकाले कोभिड विरामीका लागि उपयुक्त पनि छ । विजुली, पानी लगायतका अत्यआवश्यकीय पुर्वधारको समेत यहाँ अभाव छैन ।
यो अस्पतालको नै संरचना प्रयोग गर्नेतर्फ स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारको ध्यान जाने हो भने चाँडोभन्दा चाँडो ५० बेडको सुविधायुक्त कोभिड उपचार केन्द्र वा त्यो सम्भव नभएर आईसुलेसन सेन्टर बन्न सक्ने अवस्था छ । यसतर्फ सरोकारवालाहरुको ध्यान जाओस । अझै पनि कोरोना संक्रमणको अवस्थामा झापामा बढ्दो रहेको छ । संक्रमणदर र मृत्युदरले पनि मानिसहरुलाई त्रसित बनाई रहेको छ । अझ बालबालिकाहरुका लागि त न आईसुलेसन न त क्वारेन्टाइनहरु नै रहेकाछन् । यसलाई वालमैत्री क्वारेन्टाइन वा आईसुलेसन सेन्टर पनि बनाउन सकिन्छ । जुन जिल्लामा कहि पनि अहिलेसम्म छैन ।
शुरुमा क्षेत्रिय भनिएपनि अहिले नयाँ संरचना अनुसार प्रदेशस्तरीय यो आयुर्वेदिक चिकित्सालयमा दैनिक आकस्मिकसहित बहिरंग सेवा, शल्यचिकित्सा कक्ष, सघन कक्ष, औषधालय, प्रयोगशाला सेवाजस्ता पूर्वाधार निर्माण भएकाछन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन बर्ष अघि शिलन्यास गर्नु भएको यो भवन निर्माण पूरा गर्न रु १७ करोड भन्दा बढि लाग्ने बताईएको थियो । निर्माण ब्यवसायी प्रकाश केसीका अनुसार सम्झौता बमोजिम ७५ मिटर लम्बाइ र ४५ मिटर चौडाइको अढाइतले भवन निर्माण